SP-L08 SOICARE 300ml yabasị isi osisi ọka aromatherapy ultrasonic osisi okpukpo diffuser, China SP-L08 SOICARE 300ml yabasị isi osisi ọka aromatherapy ultrasonic osisi okpukpo diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
Ekwe: aromatherapy na jụụ alụlụ, ọ na-arụ ọrụ na-eji nwayọọ, dị nnọọ mma maka ojiji na ndụ na-arụ ọrụ. Site n’ikike nke 300ml, alụlụ ahụ nwere ike ịdịru ihe karịrị awa iri. Alụlụụ mmepụta nke ihe mgbasa a bụ ihe dị ka 10-60ml / h, ọ ga-adabara ohere 70-20㎡.
Safety: Ejiri ọrụ nkwụsị ọrụ, onye mgbasa ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ na-akpaghị aka mgbe mmiri gwụrụ, ma ọ bụ oge agwụla.
Ìhè: Nke a na-esi ísì ụtọ nwere ọkụ 7 nwere ọkụ. Ọzọkwa, agba ọ bụla nwere nhọrọ dị inyoghi inyoghi, nke ahụ pụtara na ìhè nwere ike iji usoro 14 gbaa okirikiri. Ma ọ bụ, ịnwere ike ịtọ ya otu agba edozi.
Nkeji oge: Iji bọtịnụ “MIST”, ịnwere ike ịtọ ikuku ọkọlọtọ na alụlụ siri ike, kwa, ịnwere ike ịtọ ngụ oge ụdị 4: 1H, 3H, 6H na ịga n'ihu. Ọrụ a na - enyere gị aka ime ka ebe obibi dị jụụ ma zuru ike.
ngụ oge 1H / 3H / 6H / NA